FIANDRASANA NY VOKA-PIFIDIANANA OFISIALY : Miantso fitoniana ny FFM
Tsy nitsahatra nanao antso avo ny teo anivon’ny Filan-kevitry ny fampihavanana Malagasy ( Ffm) mba hahatanterahan’ny fifidianana ao anatin’ny filaminana sy fitoniana. 3 décembre 2019
Nambaran’ny FFM tamin’izay fa miankina amin’ny kandida tsirairay avy sy ny mpanohana azy ireo no ahatanterahan’ny fifidianana ao anatin’ny fandriam-pahalemana. Amin’izao ankatoky ny fiandrasana ny vokatra ofisialy izao indray dia manamafy hatrany ny antso avo efa nataony ny FFM mba hampitsaharana ny fifandranitana sy ny fifampihantsiana. Nilaza ny FFM fa tsy tokony mbola hisy hilaza ny tenany ho efa lany ny kandida satria ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana irery ihany no manambara ofisialy izany.
“Aoka tsy hiteraka fisaraham-bazana amintsika ny fifidianana”, hoy ny FFM. Nandritra ny fisokafan’ny fivoriana ara-potoana faha4 natrehin’ny mpikambana eo anivon’ny Filan-kevitry ny fampihavanana Malagasy tetsy amin’ny foibe tetsy Ampefiloha no nanaovan’izy ireo an’io fanambaràna io, omaly. Iompanan’ity fivoriana ity ny fandinihana ny antontan-taratasin’ireo mpiasam-panjakana sy ny sehatra tsy miankina izay lasibatry ny raharaha politika teo anelanelan’ny taona 2002 – 2009.